9:25 PM Literature, Profiles No comments
Profile: Prajwal Parajuly, the author of The Gurkha's Daughter
सन् २०१० अपि्रलको कुनै एक दिनको कुरा हो । ज्वालामुखीको खरानी लन्डनको वायुमण्डलभरि उडिरहेका थिए । जहाज उडानहरू रद्द भएका थिए । बाटामा हिँड्नसमेत गाह्रो भइरहेको थियो । लन्डन बुक फेयरमा हिलारी मेन्टल बोल्न आउने कार्यक्रम थियो । प्रज्ज्वल झोला बोकेर निस्किए, मेन्टललाई सुन्न । त्यस बेला अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा क्रिएटिभ राइटिङ पढ्न आवेदन दिएका थिए । उनलाई लाग्यो, मेन्टललाई सुन्दा अक्सफोर्डको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न केही सहयोग नै पुग्ला । मेन्टललाई त सुने तर ज्वालामुखीको राखकै कारण बुक फेयरका अरू सबै कार्यक्रम रद्द भयो । राम्रा कार्यक्रमहरू हेर्न नपाएकाले दिक्क मान्दै फर्केकी एक महिलासँगै ट्रेनमा बस्न पुगे उनी । गफ गर्ने मेसोमा ती महिलाले आफूलाई लिटररी एजेन्ट भएको बताइन् । झोलामा बोकिराखेको आफ्नो एउटा कथा हेर्न भनी तिनै एजेन्टलाई थमाए उनले । त्यसबेला उनलाई हेक्का थिएन, यसै विन्दुमा उनको जिन्दगीले एउटा ठूलै मोड लिइसकेको थियो भन्ने । केही दिनपछि नै सुसन इयरउड भन्ने ती महिलाले उनका अरू कथा पढ्ने मन भएको बताइन् । अन्य केही कथा पठाइदिए । अक्सन चल्यो, कोर्कस जस्तो ठूलो प्रकाशन गृहले उनका कथाहरू छाप्ने निश्चय गर्‍यो । त्यति मात्रै हो र ? उनको अर्को उपन्यासका लागि पनि पाण्डुलिपि नै नहेरी उनलाई एड्भान्स दियो । अर्को वर्ष यसै समयमा उनको 'ल्यान्ड ह्वेर आई फ्ली' नामको उपन्याससमेत बजारमा आउनेछ । उनले लेख्ने काम सिध्याइसके ।
अब यस संग्रहलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने जमर्को गरेका छन् उनले । तर उनको नेपाली भाषामाथिको पकड अभ्यासको कमीले कमजोर हुँदै गएकाले अनुवादका लागि बा आमाको सहयोग लिएका छन् । बीसी शर्मा र सरला भट्टराई आजकल जोडतोडले छोराका अंग्रेजी कथालाई नेपालीमा अनुवाद गर्न लागेको उनले दंग पर्दै सुनाए ।
यो त भयो सन् २०१० पछि अग्लिएको उनको करियर ग्राफ । तर त्यहाँसम्म आइपुग्न उनले गरेको यात्रा कम रोमाञ्चक छैन ।
१८ वर्षको उमेरदेखि अमेरिका बसेका उनले कम्युनिकेसन मेजर लिएर स्नातक गरे । त्यसपछि भने भिलेज भ्वाइस नामको पत्रिकामा विज्ञापन शाखामा काम गरे । तर न उनलाई आफूले अध्ययन गरेको विषयले चित्त बुझेको थियो, न उनले गर्ने कामले कुनै सन्तुष्टि दिन्थ्यो । काम झिंझोलाग्दो बन्न लागेपछि उनले अरू कुनै योजना नबनाई चटक्कै छाडिदिए । अब अगाडि के गर्ने भन्ने उनलाई कुनै हेक्का नभएको बेला, अमेरिकी रुममेट लिएर उनी भारत आए । भारतका विभिन्न सहर घुमे । घुम्ने क्रममा उनको रुममेट सन मोहिनी ह्यानले ब्लग लेख्न थाल्यो । साथीले लेख्न गरेको प्रयत्नबारे उनी भन्छन्, 'विचरा, एकाउन्टेन्ट मान्छे, कहिल्यै केही नलेखेको । तर जबरजस्ती भए पनि लेख्थ्यो उसले ब्लग । परिवार र साथीहरूलाई आफूले देखेको कुरा भन्न ।' त्यसै बेला उनले पनि आफ्ना अनुभूतिहरू लेख्न थाले । उनलाई लेखनका तकनिकीहरू थ्ााहा थियो । उनले राम्रैसँग आफ्ना अनुभवहरू फेसबुकमा लेख्न थाले । भारतका थुप्रै सहरहरू घुमेर उनको साथी फक्र्यो । भर्खरै जागिर छोडेका उनलाई फर्किन मन भएन । फेरि उनी मनालीतिर हानिए । कारण उनीसँग केही काम थिएन । र जसको जागिर वा अरू कुनै उद्यम छैन, त्यसैलाई मान्छेले तिमी के गर्दै छौं आजकल भनेर सोध्ने गर्छन् । त्यसउपर, कुनै आफन्तको केही सानातिना काम पर्‍यो भने, पहिल्यै सम्भिmने बेरोजगारलाई नै हो । यी सब भोगेपछि आफ्नो बेकामेपनलाई अरूका नजरबाट लुकाउन उनले लेख्ने विचार गरेर मनाली जाने निधो गरे । त्यसबेलासम्म त्यो लेखनको फिलिंगो उनको मस्तिष्कमा रापिलो बनिसकेको थियो । मुस्कुराउँदै भन्छन्, 'मैले लेख्न थालेर खासमा मेरो बेकामेपनलाई लेजिटिमाइज गरेको हुँ ।'
प्रज्वल लेखक नै बन्नलाई कुनै योजना बनाएर लामो यात्रामा निस्किएका होइनन् । उनका स्पष्टोक्तिहरूबाट थाहा लाग्छ, उनी कतै संयोगले र कतै उनको स्वभावले धकेलिएर लेखक बनेका छन् । भविष्यमा पनि लेख्नेबाहेक उनको केही योजना छैन । हामीसँगको संवादमा उनले एउटा वाक्य निकैपटक दोहोर्‍याए मानांै उनले लेख्ने दौरान सिकेको गुह्य त्यति नै हो- 'लेख्न सजिलो छैन ।' आफूभन्दा पछि आउने पुस्ताले पनि यति बुझिदेओस् भन्ने उनको चाहना रहेको बुझिन्थ्यो । उनलाई लाग्छ फेसबुकमा दुई चार मीठा वाक्य लेख्ने अनि लाइक गनेर बस्नेले लेखनमा उन्नती गर्न सक्दैन । अन्तिममा हामीले सोध्यौं, 'तपाईं त भाग्यमानी हुनुभयो, संयोगवश एजेन्टसँग भेट भयो र तपाईंको प्रकाशन हुने मौका जुर्‍यो । तर लेख्न चाहने अरू युवाले पछ्याउनुपर्ने कुनै खास बाटो छ ?' उनले मौलिक लवजमा ती लेखक बन्न चाहनेलाई भने, 'सबैलाई लेख्न सक्छु जस्तो लाग्छ तर लेखेर देखाउनु अप्ठ्यारो छ । मेरो परिवारका सबै सदस्यलाई आफू लेखक हुन सक्छु भन्ने लाग्छ । खै त कसैले लेख्दैन । काकीले एउटा कविता संग्रह निकाल्नुभयो अनि मैले लेखें । सबभन्दा पहिला लेख्नु त पर्‍यो नि हौ । सक्दो राम्रो लेख्नु, अनि सोच्नु अरू कुरा !'
प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर १६ १०:२९ (कान्तिपुर दैनिक )